Ndị na-ahụ maka ụgbọ elu Delta na-agbagha maka iwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị na-ahụ maka ụgbọ elu Delta na-agbagha maka iwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
N'ọnwa Ọgọst, a hụrụ mkparita ụka dị egwu n'etiti ndị na-emetụta Delta Air Lines mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ha ga-atụkwasị ndị ọrụ na-anaghị agba ọgwụ mgbochi na COVID-200 $ 19 kwa ọnwa.
Companieslọ ọrụ US na-ewepụta atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-29.
Delta Air Lines ga -amanye ndị ọrụ na -agbabeghị ọgwụ ego $ 200 kwa ọnwa.
Atụmatụ Delta Air Lines dugara na ịrị elu 150% na mkparịta ụka mmetụta.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ wepụtara atụmatụ ikike ịgba ọgwụ mgbochi mgbe nkwado nri na ọgwụ nchịkwa US (FDA) nyere ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 na Ọgọst 2021. Delta Air Lines, Inc (Delta Air Lines) werekwara usoro siri ike iji kpalie ndị ọrụ site na -abawanye ego nlekọta ahụike nke ndị ọrụ a na -agbabeghị ọgwụ mgbochi na atụmatụ nlekọta ahụike ha na izute ịrị elu a na -atụ anya na njem njem. Nke a butere ịrị elu 150% na mkparịta ụka ndị na-emetụta mmetụta 'ọgwụ mgbochi' na dashboard ụlọ ọrụ Delta Air Lines n'ime ụbọchị 90 gara aga (June-August), n'ime ọnwa atọ gara aga.
Ndị na-emetụta ya hụrụ nke a dị ka ụzọ kachasị ọhụrụ iji mee ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ banye COVID-19 jab, n'ihi na ọrịa na-efe efe agbaghawo echiche nke ndị ụgbọ elu. Mmetụta mmetụta na-adịkwa mma na nha a n'ihi na ọ bụ nzọụkwụ dị mkpa iji lebara ihe egwu ego metụtara n'ihi na nkezi ọnụnọ ụlọ ọgwụ maka COVID-19 na-efu ụgbọ elu US $ 50,000 kwa onye.
N'ọnwa Ọgọst, a hụrụ mmụba ọzọ na mkparịta ụka mmetụta mgbe ụlọ ọrụ ụgbọ elu kwupụtara mmekorita ya na onye ọrụ ụgbọ elu French-Belgium Thalys iji nye njikọ ụgbọ okporo ígwè n'etiti Amsterdam na obodo Belgium nke Brussels na Antwerp.
N'otu aka ahụ, enwere mmụba dị ukwuu na mkparịta ụka ndị na-emetụta ihe na July, mgbe ụgbọ elu Atlanta dabere na uru mbụ nkeji iri na ise kemgbe mmalite oria ojoo COVID-19, mgbe ọ gbasasịrị mfu mfu ụzọ n'ụzọ anọ. Na -ebili njem ezumike ụlọ na ihe njem njem azụmahịa yana enyemaka gọọmentị etiti akwadola Delta Air Lines iji nweta uru ụzọ n'ụzọ anọ nke $ 652m na Q2 2021.
Delta Air Lines kwupụtara atụmatụ ya dị egwu na June iji were ihe karịrị ndị ọkwọ ụgbọ elu 1,000 site na oge ọkọchị nke 2022, na -atụ anya mmụba nke ọchịchọ njem mgbe mgbake site na ọrịa ọjọọ. Nke a butere mmụba na mkparịta ụka ndị na -emetụta ihe na June.
Ebe nchekwa data Job na-ekpughe na maka ọtụtụ n'ime 2020, ụlọ ọrụ ahụ hụrụ akwụkwọ ozi otu ọnụọgụ. Agbanyeghị, Delta Air Lines hụrụ mmụba n'ọrụ ọrụ na 2021. Ndepụta sitere na ọrụ 101 na Jenụwarị 2021 ruo ọrụ 474 na Ọgọst 2021, na ntinye akwụkwọ na -ahụ mmụba 55% n'etiti Q2 2021 na Q3 2021.
Delta Air Lines na -agbago ụgwọ ọrụ na 2021 iji gboo nnukwu njem. Tụkwasị na nke ahụ, ego ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ọrụ dị mkpa maka idobere njikere oge, dị ka ndị na -ahụ maka ọrụ ndị ahịa, ndị nnọchi anya tiketi/ọnụ ụzọ ámá, ndị ọrụ ibu ibu gosiri. Ịnye ndị na -arụzi ụgbọ elu na ndị injinia ahụla ihe na -arị elu kemgbe June 2021. Ụlọ ọrụ a na -elekwasịkwa anya n'ịbawanye ego ha na -ebubata ibu na oke ahịa na mpaghara Latin na EMEA.